Amazinga kashukela wegazi wohlobo 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela - yini into ejwayelekile? > Isifo sikashukela
Amazinga kashukela wegazi wohlobo 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela - yini into ejwayelekile?
Abantu abaningi bazibonela mathupha ukuthi siyini isifo sikashukela noshukela wegazi. Namuhla, cishe oyedwa kwabane uyagula noma unesalamane esinesifo sikashukela. Kepha uma ubhekene nalesi sifo okokuqala, khona-ke wonke la magama awasho lutho.
Emzimbeni ophilile, amazinga kashukela alawulwa ngokuqinile. Ngegazi, ligobhoza kuzo zonke izicubu, bese kuthi okungaphezu kwalokho kuchazwe emchameni. I-metabolism ephazamisiwe kashukela emzimbeni ingabonakala ngezindlela ezimbili: ngokwandisa noma ukunciphisa okuqukethwe.
Kusho ukuthini igama elithi “ushukela omkhulu”?
Emkhakheni wezokwelapha, kunegama elikhethekile lokwehluleka okunjalo - i-hyperglycemia. I-Hyperglycemia - ukwanda kwesilinganiso se-glucose ku-plasma yegazi kungaba okwesikhashana. Isibonelo, uma kubangelwa ushintsho kwindlela yokuphila.
Ngomsebenzi wezemidlalo ophakeme noma ukucindezela, umzimba udinga amandla amaningi, ngenxa yalokho, ushukela omningi ungena kwezicubu kunokujwayelekile. Ngokubuyela kwendlela yokuphila ejwayelekile, ushukela wegazi uyabuyiselwa.
Ukubonakaliswa kwe-hyperglycemia ene-ushukela omningi isikhathi eside kukhombisa ukuthi isilinganiso sokungena kweglue kuphezulu kakhulu kunaleso umzimba ongasidonsela noma usibusise.
Amazinga we-glucose angagxuma kunoma iyiphi iminyaka. Ngakho-ke, udinga ukwazi ukuthi kuvamile kangakanani ezinganeni nakubantu abadala.
Kuze kube inyanga 2,8-4,4
Ngaphansi kweminyaka eyi-14 3,2-5,5
Iminyaka eyi-14-60 ubudala 3,2-5,5
Iminyaka engama-60-90 ubudala 4,6-6,4
Iminyaka engu-90+ 4,2-6,7
Lapho umuntu ephilile, ama-pancreas asebenza ngokujwayelekile, amazinga kashukela egazi athathwe esiswini esingenalutho asebangeni le-3.2 kuye ku-5.5 mmol / L. Lokhu kujwayelekile kwamukelwa ngomuthi futhi kuqinisekiswa izifundo eziningi.
Ngemuva kokudla, amazinga kashukela akhuphukela ku-7.8 mmol / h. Ngemuva kwamahora ambalwa, ubuyela kokujwayelekile. Lezi zinkomba zilungele ukuhlaziywa kwegazi elithathwe emunweni.
Kumuntu ophethwe isifo sikashukela sohlobo 1 noma uhlobo 2, isilinganiso sikashukela egazini esinikelwe esiswini esingenalutho siyakhuphuka. Ithonywa kakhulu ukuthi yimiphi imikhiqizo efakwe unomphela ekudleni kweziguli. Kepha ngokuya ngenani le-glucose, akunakwenzeka ukucacisa ngokunembile uhlobo lwesifo.
Izinkomba ze-glucose ezilandelayo zibhekwa njengezibucayi:
Ukusheshisa igazi kusuka emunweni - ushukela ngaphezulu kuka-6.1 mmol / l,
Ukusheshisa kwegazi kusuka emithanjeni kunoshukela ngaphezulu kwe-7 mmol / L.
Uma ukuhlaziywa kuthathwa ihora ngemuva kokudla okugcwele, ushukela ungagxuma ufike ku-10 mmol / L. Ngokuhamba kwesikhathi, inani le-glucose liyancipha, ngokwesibonelo, amahora amabili ngemuva kokudla kuya ku-8 mmol / L. Futhi kusihlwa kufinyelela esimweni esivame ukwamukelwa esingu-6 mmol / l.
Ngamazinga aphezulu kakhulu okuhlaziya ushukela, isifo sikashukela siyatholakala. Uma ushukela ukhule kancane nje futhi ububanzi obungu-5.5 kuya ku-6 mmol / l, bakhuluma ngesimo esiphakathi - prediabetes.
Kunzima kubantu abajwayelekile ngaphandle kwemfundo yezokwelapha ukuqonda imigomo. Kwanele ukwazi ukuthi ngohlobo lokuqala, ama-pancreas acishe ayeke ukukhipha insulin. Futhi kwesibili - inani elanele le-insulin lifihlwa, kodwa alisebenzi njengoba kufanele.
Ngenxa yokungasebenzi kahle emzimbeni unesifo sikashukela, izicubu zithola amandla anganele. Umuntu usheshe akhathale, uhlala ezwa ubuthakathaka. Ngasikhathi sinye, izinso zisebenza ngemodi ebanzi, izama ukususa ushukela owedlulele, yingakho kufanele ugijime njalo ukuya endlini encane.
Uma amazinga eglucose agcinwa ephezulu isikhathi eside, igazi liqala ukuqina. Ulahlekelwa yikhono lokudlula emithanjeni emincane yegazi, ethinta umsebenzi wazo zonke izitho zomzimba. Ngakho-ke, umsebenzi wokuqala ukubuyisela ushukela wegazi ube yinto evamile ngokushesha okukhulu.
Ungalungiselela kanjani ukuhlolwa kwegazi ushukela?
Ukuze ucwaningo lunikeze umphumela onembile kunayo yonke, kufanele ulalele imithetho embalwa elula:
Ungabuphuzi utshwala ngosuku olwandulela inqubo,
Amahora ayi-12 ngaphambi kokuhlaziywa, senqaba ukudla. Ungaphuza amanzi
Yenqaba ukuxubha amazinyo akho ekuseni. Izinyo lezinyo liqukethe izinto ezingathinta ubumsulwa bokuhlaziywa,
Musa ukuhlafuna izinsini ekuseni.
Kungani isilinganiso soshukela wegazi esiswini esingenalutho futhi ngemuva kokudla siyehluka?
Amanani aphansi kashukela egazini anganqunywa kuphela lapho umuntu enesisu esingenalutho, okungukuthi, esiswini esingenalutho. Ehlelweni lokutholwa kokudla, izakhamzimba zidluliselwa egazini, okuholela ekwandeni kwamaphesenti kashukela ku-plasma ngemuva kokudla.
Uma umuntu engabheki ukuphazamiseka ku-carbohydrate metabolism, khona-ke izinkomba zanda kancane futhi isikhathi esifushane. Ngoba ama-pancreas akhiqiza i-insulin efanelekile ukuze asheshe anciphise amazinga kashukela abe yinto evamile.
Lapho kungekho-insulin eyanele, eyenzeka ngohlobo lokuqala lwesifo sikashukela, noma ingasebenzi kahle, njengodidi lwesibili, inani likashukela likhuphuka njalo ngemuva kokudla futhi lingaconsi amahora ambalwa. Ukungasebenzi okunjalo emzimbeni kungadala i-pathologies yezinso, ukulahleka kombono, ukuwohloka kohlelo lwezinzwa, kuholele ngisho nasekushayweni noma ekushayweni yinhliziyo.
Luhlolwa nini futhi kanjani?
Ukuhlaziywa kweshukela kufakwa kusethi esezingeni lokuhlolwa lapho ufaka isicelo somsebenzi, ukwamukelwa esikhungweni sezemfundo, enkulisa.
Kepha bangamthumela ngokuqondene nezikhalazo zesiguli:
Ukuphiliswa isikhathi eside kokuqhuma
Ukumunca i-acetone ephuma emlonyeni
Ukhipha udaba lokudluliselwa ukuze luhlaziywe, udokotela uhlala exwayisa ukuthi uthathwa esiswini esingenalutho. Igazi lingadonswa emunweni noma emthanjeni. Abantu abangajwayelekile isifo esifana nesifo sikashukela bavame ukunikela ngegazi ezikhungweni zezempilo.
Kungcono ukuxwayisa udokotela kusengaphambili ngokuba khona kwezifo ezingamahlalakhona, ingcindezi, umkhuhlane noma ukukhulelwa, ngoba wonke la maqiniso angahlanekezela isithombe sangempela. Isibonelo, izinga le-prolactin eliphezulu lowesifazane lingadala ukwanda koshukela. Futhi, unganikeli ngegazi uma usebenza ngokushintshana ebusuku.
Akunandaba noma unesifo sikashukela noma cha, ukuhlaziya kufanele kuthathwe okungenani isikhathi esingu-1 ngonyaka. Ikakhulu kubantu abasengozini:
Ngemuva kweminyaka engama-40,
Ukuba nezihlobo ezinesifo sikashukela sohlobo 2.
Ushukela wegazi kufanele ulinganiswe kangaki?
Imvamisa yesampula yegazi yokuhlaziywa kuya ngohlobo lwesifo sikashukela. Ngohlobo lokuqala, kufanele lwenziwe ngaphandle kokuhluleka ngaphambi komjovo we-insulin. Uma izinkathazo zenzekile, ukucindezela, isigqi sempilo kushesha, kanye nokuba ngcono, izinkomba ze-glucose kufanele zibhekwe ngokucophelela.
Ezokwelapha, kusetshenziswa izinhlobo ezine zokuhlaziya ushukela. Kungani kwenziwa ucwaningo olungaka? Yikuphi okunembile kunazo zonke?
Ukuhlolwa kwegazi likashukela kusuka emunweni noma emthanjeni esiswini esingenalutho. Ukuqasha ekuseni. Kunqatshelwe kungakapheli amahora ayi-12 ngaphambi kwenqubo.
Ukuhlolwa kokubekezelela ushukela kungamahora amabili. Umuntu unikezwa isiphuzo sokuphuza isisombululo esikhethekile samanzi, kubandakanya i-75 amagremu kashukela. Igazi lithathwa ukuze lihlaziywe ihora noma amabili ngemuva kokuphathwa. Le ndlela ithathwa njengeyiyona impela ekutholakaleni kwe-prediabetes noma isifo sikashukela. Kepha ukungathandeki kwayo isikhathi.
Ukuhlaziywa kwe-hemoglobin ye-glycated. Ivumela odokotela ukuthi baqonde ukuthi liphi% ushukela egazini elihlobene ngqo namaseli abomvu egazi (amaseli egazi). Indlela iyadingeka kakhulu. Kuyasetshenziselwa ukuthola ukutholakala kwesifo okuso, kanye nokubheka ukusebenza kahle kwezindlela zesifo sikashukela ezisetshenziswe ezinyangeni ezimbili ezedlule. Izinkomba azincike kwimvamisa yokudla ukudla. Ungakuhlaziya nganoma yisiphi isikhathi esikahle. Inqubo uqobo lwayo ithatha isikhathi esincane. Ayilungele abesifazane abakhulelwe.
Ukuhlolwa kwegazi ushukela amahora amabili ngemuva kokudla. Kusetshenziselwa ukuqapha ukusebenza kwezindlela ezikhethiwe zokwelapha lesi sifo. Kaningi, iziguli zizenza ngokwazo zisebenzisa i-glucometer. Kuyadingeka ukuthola ukuthi ngabe umthamo wakhethwa kahle kanjani umjovo we-insulin ngaphambi kokudla.
Namuhla, isivivinyo se-glucose esivamile akuyona indlela engcono yokuthola isifo sikashukela. Ngani?
Ngenkathi ukuthuthukiswa kwalesi sifo, gxuma elisegazini kashukela libhekwa kuphela ngemuva kokudla. Eminyakeni embalwa yokuqala yesifo sikashukela emzimbeni, ukuhlaziywa kwesisu esingenalutho kungakhombisa izinga likashukela egazini. Kepha ngasikhathi sinye, izinkinga zempilo ezitholakala kulesi sifo ziqala ukugcwala.
Ungawugcina kanjani uvamile ushukela wakho wegazi ngokwakho?
Kumuntu onesifo sikashukela, indlela ejwayelekile kashukela wegazi ine-wide wide range.
Ingqangi yokwelashwa ukufeza izinkomba zesimo somzimba onempilo. Kepha ekusebenzeni, kunzima kakhulu ukukwenza. Ngakho-ke, kubhekwa njengokujwayelekile uma okuqukethwe ushukela kukubanga 4 kuya ku-10 mmol / L. Ivumela okweqile okungamkhawulo komkhawulo.
Ukuba nezinkomba ezinjalo, isiguli ngeke sizwe ukuwohloka kwekhwalithi yempilo isikhathi eside esanele. Ukuze uqaphele ukuchezuka okufika ngesikhathi esimweni esimisiwe sikashukela wegazi kushukela, kufanele ngaso sonke isikhathi ube ne-glucometer ekhona.
Ngaphezu kwemithi ebekwe udokotela wakho, ungangehlisa ingozi yakho kashukela ophezulu ngokukhetha indlela yokuphila enempilo kanye.
Udokotela uyalela ukuthi ayohlolwa, enze ukuxilongwa futhi anikeze nemithi. Konke okunye kukuwe. Abantu abaningi baphila nesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2 futhi bahola indlela yokuphila esebenzayo, ukwakha umsebenzi, ukufinyelela ubude, ukuhamba.
Ukuqinisekisa impilo enhle iminyaka eminingi, uzodinga ukunakwa okuncane kuphela emzimbeni wakho nokuzithiba. Akekho kodwa ongakwenza.
Landela izincomo zikadokotela, qapha ushukela wakho nokudla kwakho, unganikezeli ekucindezelweni, ngakho-ke isifo sikashukela ngeke sikunqande umbono ophelele, futhi ngeke sibe isithiyo ekufinyeleleni izinhloso.